Ny fomba nampiasàn’ny Haitiàna iray ny soanambo mba hiteraka fahazakàna dona taorian’ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Ny 'Konparèts [dia ] tena be otrikaina sy tonga dia vonona'
Voadika ny 31 Aogositra 2021 2:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Esperanto , Dansk, English
Tsy lany laniana ny soanambo konparèts ao Jérémie. Sary natolotry ny Trees That Feed Foundation, nahazoana alàlana.
Tao amin'ny Bilaogy Petchary ity tantara ity no navoaka voalohany. Dika nokiraina no averina avoaka etsy ambany miaraka amin'ny fanomezandàlana am-pitiavana avy amin'ny mpanoratra.
Jérémie, tanàna amorontsiraka iray mambabo fo ao amin'ny saikinosy atsimo-andrefan'i Haiti—ilay toa rantsan-tongotra mihoatra ery amin'ny tendrony andrefan'ny nosy Hispaniola, tena akaiky an'i Jamaika—ary ny vahoakany misy eo amin'ny 97.000 eo, no iray amin'ireo faritra simban'ilay horohorontany nanana tanjaka 7,2 namely ny firenena tamin'ny 14 Aogositra.
Na Jérémie, any amin'ny avaratr'ilay saikinosy, sy Les Cayes, mpiray vodirindrina aminy ao atsimo, dia samy voa mafy avokoa. Nirodana ireo tranobe ary voafandrika tany ambany korontan-javatra tany ny olona. Nasian'ilay horohorontany ihany koa ny faritra be hazo mikitroka, Pic Macaya, valanjavaboary iray nomena ny anaran'ilay tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny firenena, niteraka fihotsahan'ny tany. Hatramin'ny herinandro lasa, mbola nisy foana ny ezaka famonjena natao hikarohana ireo sisa velona ao amin'ilay faritra.
Ankoatra ireo fitantaràna marobe momba ilay loza voajanahary teny amin'ireo lohateny lehibe, anefa, ary na teo aza ny korontana politika, sôsialy sy toekarena niainan'ny firenena tato ho ato, mitohy ny fiainana ao Haiti. Izany foana no zavamisy.
5.000 eo ireo mponina mbola miaritra ny hirifirin'ny fiantraikan'ilay horohorontany teo aloha kely teo no nahazo konparèts, isan'izany ireo olona 257—hita eto ny sasany amin-dry zareo—vokarin'ny “Jérémie Breadfruit Flour and Bakery” (fanaovana mofo sy koba soanambo) tamin'ny 19 Aogositra. Sary natolotr'i Pierre-Moïse Louis, fampiasàna nahazoana alàlana.
Hatreto ilay horohorontany 2021, izay nahery lavitra noho ilay talohany tamin'ny 2010, dia nahafaty Haitiàna mihoatra ny 2.200 sy naharatràna olona marobe, tsy hita popoka na tsy manana hialofana. Nahatonga Haitiàna marobe ihany koa ho amin'ny toeran'ireo tsy mahita ho arapaka, saingy nanao dingana ny trano fanaovana mofo iray ao an-toerana, Jérémie Breadfruit Flour and Bakery mba hitondra fanampiana. Hatramin'ny nitrangan'ilay loza voajanahary, nanolotra sakafo mafilotra sy be otrikaina izy io, ka isan'izany ireo mofo sy konparèts, ho an'ireo mponina tao an-tanàna—manakaiky ny 22.000 nandritra ny herinandro taorian'ilay horohorontany fotsiny.
Sady mafilotra no mahavoky ny konparèts, mofo matevina iray manana hatsaràna toy ny cake, izay efa sakafo nentindrazana fanao ao Jérémie—saingy ilay trano mpanao mofo, izay i Pierre Moïse Louis no tompony, ary vao dimy taona monja izao no nijoroany, dia nahandro karazana konparèts iray tena miavaka, nampiasàna ny feta avy amin'ny soanambo. Na dia voadona tamin'ilay horohorontany ihany koa aza ny asa fandraharahàna fanaony, natolotr'i Louis ireo tahiry azo navotana tao amin'ilay trano fanaova-mofony ho an'ireo fianakaviana tra-pahasahiranana tao an-toerana.
konparèts matsiro, vao avy navoaka tao anaty lafaoro. Sary natolotry ny Trees That Feed Foundation, fampiasàna nahazoana alàlana.
Fombandrazana efa an-jato taona ny fanaovana mofo Konparèts. Hita ao anatin'io tsiro io ny fàkana sakamalaho, ampahana bergamot, vanila, amandes, kanelina, star anise, jirofo, voanio voakiky, ranom-pary, karibonetra, dobera, menaka avy amin'ny biby, sira iray tsongo ary mazava loatra…ny lafarinina. Ka aiza ho aiza no miditra ny soanambo?
Ny Trees That Feed Foundation, fikambanana tsy mitady tombony ara-bola, miorina ao Etazonia, izay niaraha-nanangana tamin'ireo Jamaikàna, Mary sy Mike McLaughlin, dia nanolotra zanaka soanambo maro ho an'i Haiti tato anatin'ny 10 taona lasa. Te-hametraka ny “sakafo ampiasain'i Haitiàna, ho an'ny Haitiàna,” mandrisika ny hitrandrahana vokatra hafa azo avy amin'ny soanambo ilay fandaharanasa. Rehefa niroborobo ireo hazo natolotra, nanomboka namadika ny voankazo ho lasa lafarinina ny mponina tao an-toerana—na farafaharatsiny i Louis—nanao mofo konparèts avy tamin'izany. Miaraka miasa amin'ny Trees That Feed, isambolana ny trano fanaovany mofo dia mamokatra mofo an'arivony ho fanampiana ireo sekoly, akanin-jaza, ary ireo fikambanana hafa mila izany, eny fa na talohan'ilay horohorontany aza. Ny Jérémie Breadfruit Flour & Bakery ihany koa dia mampanao fiofanana fahandroan-tsakafo izay ampianarana ny olona ny fomba fampiasàna ny soanambo eny an-dovian-dry zareo, ary manome tosika ny fandraharahàna ao an-toerana.
Mpiasa iray ao amin'ny Jérémie Breadfruit Flour & Bakery mampiseho ny fomba famoasana ny soanambo. Sary natolotry ny Trees That Feed Foundation, fampiasàna nahazoana alàlana
Momba ireo ezaka taorian'ny horohorontany, dia hoy i Louis:
Ifantohanay ny konparèts satria [izy] tena be otrikaina sy tonga dia vonona hohanina, araka izany, tsy mila mahandro akory ny olona. Mipetraka eny an'arabe izao ny olona ao Jérémie satria rava ny tranon-dry zareo ary, noho ny mbola fihetsehana nisy taorian'ilay horohorontany, matahotra ny hiverina hiditra any anatin'ireo trano [sisa tavela] ry zareo, izay tsy mbola mafy rahateo. Tsy manana sakafo sy rano, ka mila sakafo tonga dia vonona, satria tsy manana lakozia [natao] hahandroana sakafo.
Ny Trees That Feed Foundation no mpiara-mitantsoroka fototra ao anatin'ny Caribbean Tree Planting Project (CTPP), hetsika iray tarihan'ny Caribbean Philanthropic Alliance (CariPhilAlliance) izay hita manerana ireo faritany 22.
Ny Jolay tamin'ity taona ity no natao ny Herinandro Voalohany Fambolena Hazo tao Karaiba, saingy ny Febroary 2020, ny CTPP dia efa namboly mihoatra ny 1,5 tapitrisa nanerana an'i Karaiba, ka ny betsaka tamin'izany dia tao Haiti. Ny tanjony manaraka dia ny hamboly hazo 2 tapitrisa eo anelanelan'ny Jolay 2021 sy Jona 2022, manerana ny faritra.
Ho fanampin'ireo hetsika hafa, miaraka miasa ny CariPhilAlliance sy ny Trees That Feed mba hanampiana amin'ny fanitarana ny famokarana mofo konparès ataon'ilay trano fanaovana mofo:
Tsy vitan'ny hoe mafilotra, fa ireo mofo vita dia natao avy amin'ny soanambo izay manankarena amin'ny vy, pôtasiôma, vitamina A, ary vitamina sy mineraly maro hafa. Natao ihany koa avy amin'ny voanio, sakamalaho, ary feta hafa mitondra prôteina, vy, pôtasiôma, antioxidants sy otrikaina hafa. Ny hazo soanambo iray dia afaka mamokatra voankazo ampy ho ana fianakaviana iray manontolo, ary afaka velona hatramin'ny 80-100 taona, manome fahafahana manao zavatra ho an'ireo mpandraharaha ao Haiti mandritra ny taona maro ho avy.